Ọdịnaya: Igodo nke Killer Blog Posts | Martech Zone
Kekọrịta oke ọdịnaya ga-abụ ihe na-akpali akpali ruo mgbe ebighi ebi maka ụlọ ọrụ iji wuo ọnụnọ ha n'ịntanetị, kesaa akụkọ ha, ma dọta, tinye ma ree ndị ahịa. Anyị na ndị ahịa abụọ na-arụ ọrụ ugbu a atụmatụ ha agbanweela ma ha anaghị ekenye ọdịnaya anya site na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma ọ bụrụ na anyị emepebeghị vidiyo ma ọ bụ nkọwa nkọwa… yana ịda mbà na olu ha, ndị ọbịa, na - n'ikpeazụ - na - eduga na emechi emekpala. Ọdịnaya bụ oxygen nke achọrọ iji mee ka ịre ahịa gị n'ịntanetị dị ndụ.
Blog gị nwere ike ịbụ ihe bara uru na-arụ ọrụ n'ịntanetị na ịga nke ọma. Site n'iji usoro na-agbanwe agbanwe, ịtọlite ​​ma jigide olu gị pụrụ iche, yana ịnye ndị na - agụ akwụkwọ gị ogo dị elu, nke bara uru, ị ga-aga nke ọma iji hụ na ọkwa ọ bụla na blọọgụ gị bụ post blog.
Nke a bu ezigbo ihe omuma zuru oke nke nwere otutu ihe ị ga - eke… Gbalia iguta ya ma tinye ihe omumu gi na ntinye aka gi. Ọ bụ nnukwu nyocha nke ụdị, mkpụrụ osisi dị ala na-elegharakarị anya, guzobe kalenda ọdịnaya na ịmịpụta ọdịnaya dị mkpa nke na-eme ka ị mata na ahịa.
Tags: blog postblog post ọdịnayaịde blọgụịde blọgụ atụmatụkpọọ n’ọrụkalenda ọdịnayaụlọ ọrụ ịde blọgụ atụmatụegbu egbu blog postndu ndu
Etu esi akpọsa na Pinterest
Jun 7, 2014 na 5:20 AM
Ndụmọdụ magburu onwe ya na ọdịnaya, ogidi anọ ahụ dị mkpa maka ịmepụta ọdịnaya dị mma nke ga-akpali clic na mbak na netwọkụ mmekọrịta, nke na-eme ka ọ pụta ìhè na ịntanetị. Daalụ maka ịkekọrịta inforgraphic Douglas a, ọ bara ezigbo uru.
Jun 8, 2014 na 10: 34 PM
Chọta utu aha ndị siri ike bụ nnukwu ihe kpatara Douglas. Reel folks na 😉 Daalụ!